Dukaanka Apple oo dib loo cusboonaysiiyay oo ku yaal Crabtree Valley Mall ee North Carolina | Waxaan ka imid mac
Dukaankii Apple oo dib loo cusbooneysiiyay oo ku yaal xarunta laga dukaameysto ee Crabtree Valley ee Waqooyiga Carolina
Dukaan Apple oo dib loo habeeyay ayaa ku sii fidaya North Carolina, Mareykanka. Dukaammada Apple waxay albaabada ufurayaan bartamaha xilliga kirismaska, xaaladdan oo kale xarunta dukaamaysiga Crabtree Valley ee Raleigh ayaa noqonaysa tan xigta si loo arko sida Dukaan Apple ah oo leh qaabka dukaanka cusub wuxuu albaabada ufurayaa dhamaadka usbuuca soo socda.
Xaaladdan oo kale furitaanka ayaa loo qorsheeyay Sabti, Diseembar 9 markay tahay 8:00 am (waqtiga maxalliga ah) iyo warbaahinno kala duwan iyo adeegsadayaashuba way ka dhawaajiyeen warka. Sawirka aan hayno bilowga qodobkaan wuxuu muujinayaa guddi madow oo caadi ah oo leh astaanta Apple tanina waxay muujineysaa in wax waliba diyaar u yihiin furitaanka weyn.
Naqshadda gudaha ee dukaanku waxay lamid tahay tan laga arki karo bakhaarka intiisa kale ee ay Apple ku leedahay xarumaha dukaamaysiga, oo leh qaabka dukaanka cusub taas oo u oggolaaneysa koorsooyinka, wadahadallada iyo wixii la mid ah, oo leh shaashadda weyn ee ku taal bartamaha dukaanka fadhiyada. Dukaankan cusub wuxuu u oggolaanayaa, sida dhammaan dukaammada dib-u-habeynta lagu sameeyay tan iyo 2015, in la isku dayo qalabyada sida kiisaska iPhone-ka, sameecadaha dhagaha iyo alaabada kale ee lagu dhex iibiyo.
Dukaanka cusubi wuxuu ku yaalaa isla meeshii sidii ka hor dib u habeynta lagu sameeyay xarunta dukaameysiga waana la qabsan doonaa meel aan ka badnayn 800 mitir murabac, dhammaantood waxaa heli kara isticmaaleyaasha Apple ee go'aansada inay booqdaan dukaanka si ay wax uga iibsadaan, koorso ama si fudud u arkaan alaabada cusub ee astaanta. Xaaladdan oo kale, furitaanka ayaa lagu daray in ka badan 500 oo dukaanno ah oo Apple ay ku leedahay adduunka oo dhan, badankooduna ku yaal carrada Mareykanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dukaankii Apple oo dib loo cusbooneysiiyay oo ku yaal xarunta laga dukaameysto ee Crabtree Valley ee Waqooyiga Carolina
Apple mar dambe uma qurux badna shaqaalaha